बैंक समाचार अपडेट - कोसी अनलाइन | Koshi Online
ट्रक साहित्य : रातो, तातो, सातो
कोरोना भ्याक्सिन लगाएका तमिल अभिनेता विवेक अस्पताल भर्ना
विराटनगरमा १४ बालबालिकामा दोस्रो फेजको कोरोना, परीक्षा पर्खँदै महानगर
विराटनगरमा १४ बालबालिकामा दोस्रो फेजको कोरोना, परीक्षा पर्खदै महानगर
कोभिडको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध
सिल भयो काठमाडौँ प्लाजा
राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर मिश्र र ढुङ्गानाले लिए सपथ
बुधबार, २६ फागुन, २०७७
काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र निलम ढुङ्गानाले सपथ ग्रहण गरेका छन् । बुधबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बालुवाटारमा आयोजित एक समारोहमा उ
सिर्जना फाइनान्स र सिटीजन्स बैंक मर्ज हुँदै
बिहीबार, २९ माघ, २०७७
विराटनगर / विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको सिर्जना फाइनान्स लिमिटेड र सिटीजन्स बैंक मर्ज हुने भएका छन् । विराटनगरमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा दुवै वित्तिय संस्थाबीच एकअर्कामा गाभिने सहमति भएको
शुक्रबार, ०५ मङ्सिर, २०७७
विराटनगर, ५ मंसिर । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ‘युरोपियन माइक्रो फाइनान्स अवार्ड २०२०’ जितेको छ । साना तथा लघु बैंकिङ्ग कार्यक्रममा आवद्ध न्यून आय भएका सदस्यलाई प्रदान गरी रहेको नविनतम योजनाका लागि अ
विराटनगर, २३ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राजश्व संकलनका लागि तीन दिन सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खुला गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको निर
अधिकांश बैंकहरुको नाफा घट्यो
आइतबार, ३२ साउन, २०७७
काठमाडौ, ३२ साउन । कोरोना महामारीबाट लकडाउन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार प्रभावित भएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सबै वाणिज्य बैंकहरुको नाफा खुम्चिएको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको असार म
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याजदर सस्तो
काठमाडौं, २९ साउन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिने कर्जाको ब्याजदर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा सस्तो बनेको छ । बैंकको आधारदर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले समग्रमा ब्याजदर पनि एकल बिन्दुमा झरेको
भौतिक रुपमा सेवा प्रवाह बन्द गर्न बैंकलाई विराटनगर महानगरको आग्रह
विराटनगर, २१ साउन । विराटनगर महानगरपालिकाले भौतिक रुपमा हुने सेवा प्रवाह बन्द गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा समुदायमा फैलिएको अवस्थालाई मध्यनजर
एनआईसीको सुपर चमत्कारिक कर्जा योजना
शुक्रबार, ०२ साउन, २०७७
विराटनगर, २ साउन । एनआईसी एशिया बैंकले सुपर चमत्कारिक कर्जा योजना ल्याएको छ । घर सवारी तथा व्यावसाय कर्जामा सुपर चमत्कारिक कर्जा योजना ल्याएको हो । योजना अनुसार बैंकले सेवाग्राहीलाई ८.२५ प्रतिशत
नयाँ मौद्रिक नीति : ०७८ असारसम्म गाभिने बैंकहरुले थप छुट पाउने
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ठूला बैंकहरुलाई एकआपसमा गाभ्ने गाभिने र प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
सेयर कारोबार आजदेखि खुल्ने
मङ्गलबार, ३० वैशाख, २०७७
विराटनगर, ३० बैशाख । सेयर बजारमा मंगलबार (आज)देखि कारोबार हुने भएको छ । लकडाउनका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेको सेयर बजार लकडाउन खुकुलो भएपछि खुलेको हो । धितोपत्र बजारमा सेयरको खरिद बिक्री मंगलब
घरबाटै निक्षेप खाता खोल्न सकिने
मङ्गलबार, १६ वैशाख, २०७७
विराटनगर, १६ बैशाख । सनराइज बैंकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि बन्दाबन्दीको अवस्थामा आफ्ना ग्राहकलाई डिजिटल बैंकिङ् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै घरबाटै मुद्दती खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरे
काठमाडौं २४ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । गभर्नरका लागि र
गभर्नर नियुक्तिगर्न समिति गठन
मङ्गलबार, १८ चैत, २०७६
काठमाडौं, चैत १८ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिश समिति गठन गरेको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिश गर्न
राष्ट्र बैङ्कको आयो राहत प्याकेज
काठमाडौं, १८ चैत । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिगत लगायतका कर्जालाई राहतस्वरूप विशेष प्याकेज ल्याएको छ
दसैंमा साटेको नयाँ नोटलाई कसरी जोगाउने ?
विराटनगर, १७ असोज । बडा दसैंको टीकाको दिन नजिकिँदै आएको छ । दसैंको दसौँ दिन अर्थात् टीकाको दिन घरपरिवारका ठूलाबडा तथा आफन्तसँग टीका जमराका साथै दक्षिणा आदान–प्रदान गरी आशिर्वाद दिने गरिन्छ । नेपाली सं
कृषि विकास बैंक ह्याकमा संलग्न थप ३ जना पक्राउ
काठमाडौं १० असोज । कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याक गरी ५ करोड बराबर रकम चोरिएको घटनामा संलग्न भएको आशंकामा थप ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाले पर्वतका २६ वर्षीय गणेश बस्याल,
बुधबार, ०८ असोज, २०७६
काठमाडौं ८ असोज । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडलाई गाभ्ने सहमति भएको छ । मेगाले गण्डकीलाई प्राप्ति गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । मेगा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भोजबहादुर श
भारतमा बसेर नेपालको बैंक ह्याक : मुख्य योजनाकार अफ्रिकी मूलका काले
काठमाडौँ ८ असोज । कृषि विकास बैङ्क ह्याक गरि रकम निकाल्ने मुख्य योजनाकार भारत बस्ने अफ्रिकी मुलका काले उपनामका पिटर रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपालका बैङ्कहरुबाट रकम निकाल्ने योजनामा रहेक
कृषि विकास बैंक ह्याक गरि १ करोड ५० लाख बढी रकम झिक्ने पक्राउ
काठमाडौं ८ असोज । कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याक गरि १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ निकालिएको छ । प्रहरीले ह्याकगरि रकम चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा ११ जनालाई विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले मंगलबार
एटीएम ह्याक प्रकरणमा नेप्स र बैंकमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ
नेपालमा एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो घटना हालै भएको छ । त्यो हो एटीएमह्याक । यसले बैंकर र बैंकको सफ्ट्वेयर सेक्यूरेटीका बारेमा प्रश्न मात्रै उठेको छैन । बैंकहरूको एटीएम सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
दशैंमा राष्ट्र बैंकले १३ अर्ब बराबरको नयाँ नोट साट्ने
मङ्गलबार, १० भदौ, २०७६
विराटनगर, १० भदौ । दशैंका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट साट्ने तयारी गरेको छ । बैंकले आगामी दशैंका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट सटही गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
उमेर हद सम्बन्धि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
मङ्गलबार, २८ साउन, २०७६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र